IPARILE ENKULU, UMZEKELO OBuhle
Emva koko, siza kukuxelela umzekeliso iperile yexabiso eliphakamileyo, ibali elibaliswa yiNkosi yethu uYesu Kristu. Ukongeza, siza kukunika ukutolika ukuba eli bali lihle lingakufundisa ntoni ukuphucula ubomi bethu.
1 Iperile yexabiso eliphakamileyo
1.1 Ibali lomzekeliso
1.1.1 Ukukhangela iiperile ngumrhwebi
1.1.2 Ekugqibeleni umrhwebi ufumana iperile efanelekileyo
1.1.3 Utshintshiselwano olukhulu ngeeperile ngexabiso elikhulu
1.1.4 Umrhwebi uyakwazi ukufumana iperile yexabiso eliphakamileyo
2 Ukutolikwa komzekeliso
3 Iimfundiso ezivela kuYesu
Iperile yexabiso eliphakamileyo
Iperile yexabiso eliphakamileyo, Ngomnye wemizekeliso edumileyo ebhaliweyo kwiBhayibhile eNgcwele; Kwincwadi nganye yeVangeli abapostile bebengafuni ukulibala iimfundiso zeNkosi yabo kwaye singafumana uninzi lwazo eBhayibhileni.
Ngokukodwa, lo mzekeliso weeperile kunye nomrhwebi (umthengisi okanye umrhwebi); Sifumana kwiVangeli ngokukaMateyu 13: 45-46. Kwezi ndinyana zimbini, sifumana oku kulandelayo:
"Kwakhona ubukumkani bamazulu bufana nomrhwebi okhangela iiperile ezintle."
Uthe ke akuyifumana iperile ixabisekileyo, waya wathengisa ngeento zonke abenazo, wayithenga.
Ngalo mzekeliso, uYesu wayefuna ukuba abafundi bakhe bafunde ixabiso kunye nokubaluleka koBukumkani baseZulwini ngokubuthelekisa neeperile exabisekileyo enokufunyanwa ngumrhwebi.
Ibali lijikeleza umntu obezinikele kurhwebo, ukuthengwa kunye nokuthengiswa kwezinto, ngakumbi iiparele. Ngalo mzekeliso, u-Yesu wayifezekisa injongo yakhe kwaye wenza abafundi bakhe kunye nabanye abantu ababemphulaphule ukuba bayiqonde into awayefuna ukufundisa ngayo iperile yexabiso eliphakamileyo.
Singahlula eli bali libe ngamacandelo ama-4, ukwenza kube lula kuwe ukuba ufunde kwaye ubenombono ongcono; Ukutolika ongakunika kona kusasebenza ngokuchanekileyo njengoko siza kuthi ekupheleni kweli nqaku. Nangona kunjalo, asinakho ukulibala imfundiso eyinyani uYesu afuna ukusifundisa yona kunye naye.
Ukukhangela iiperile ngumrhwebi
Iiparele lelinye lamatye axabisekileyo kwaye axabisekileyo akhoyo el mundo; njengamanqaku, kwanakwixesha likaYesu, la matye ayesele enexabiso, ke yinto ebalaseleyo kuBukumkani bamazulu.
Umrhwebi ekuthethwa ngaye wayesoloko ekhangela ezona pearl zibalaseleyo anokuzifumana; kuba, akazange ayeke ukuzuza into yokuqala awayibonayo. Umzamo wakhe omkhulu wokuhlala efuna ukufumana eyona intle kwiimveliso zakhe (iiperile); kungekudala yayiza kufumana umvuzo wayo.
Ekugqibeleni umrhwebi ufumana iperile efanelekileyo
Emva kwexesha elide kunye nohambo olude, ukukhangela kunye nokufumana iiparele ezilungileyo; umrhwebi, uyakwazi ukufumana ilitye kwezi ngaphandle kokulingana. Oku akuthethi ukuba uhambo lomrhwebi luphelile, kuba ngoku kuye kwafuneka ukuba alufumane ngandlela ithile; yena, kwelakhe icala, wayekulungele ukunika nantoni na ukuze afumane le perile, njengoko yayiyeyodidi.
Kwanaxa kubonakala ngathi siyifumana kakhulu le nto besiyifuna, kufuneka siqhubeke nokuzabalazela.
Utshintshiselwano olukhulu ngeeperile ngexabiso elikhulu
Ukubanakho ukufumana ezona pearl zixabisekileyo okhe wazifumana umrhwebi, umrhwebi uyaqonda ukuba, ukuze ayifumane, kufuneka ahlawule ixabiso eliphezulu kakhulu; nokuba lelona lidlula lonke uhlahlo-lwabiwo mali.
Ngaphandle koku, umrhwebi akazange afune ukuphoswa leli thuba (ngaphandle koko alinakuphindwa); Ke, enye yeendlela athe weza nayo ukufumana iperile yayikukuthengisa yonke into anayo. Nangona kwakubonakala ukubheja okunobungozi, wayesele ezimisele ngokupheleleyo ngento awayeyifuna kwaye eyazi, ukufumana loo perile, wayengenakuyifumana kwenye indawo, kwaye angaze aphinde ebomini bakhe.
Ukuba ufumene le posi inomdla, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku: Indalo kaThixo.
Umrhwebi uyakwazi ukufumana iperile yexabiso eliphakamileyo
Nje ukuba agqibe, unika yonke into anayo endaweni yokufumana iperile ezandleni zakhe; into ethi, ngaphandle kwento yokuba yenze le ndoda yanikela ngayo yonke into eyayinayo; kungekudala, bekuya kukuzisela izibonelelo ezininzi kunye neembuyekezo kunangaphambili. Kungathathwa ke ukuba umrhwebi akazange alahleke ngenene, kodwa kunoko wazuza okungaphezulu kunoko wayekunikile njengembuyekezo.
Ukusuka kulo mzekeliso umhle kangaka, emva koko sinokufumana ukutolikwa okwahlukeneyo ngeemfundiso ezininzi, nokuba ungayifumana eyakho. Ezi mfundiso zinokuba:
Indlela ka Yesu, indlela yakhe yobomi, iimfundiso zakhe, ivangeli yakhe; yinto engenakubalwa kwaye exabiseke ngenene, ukuba kunokwenzeka ukuba ikwazi ukufezekiswa kube kanye kuphela ebomini. Ubukumkani bamazulu, obuya kuba yiperile, ukuze sikwazi ukufikelela kubo, budinga ixabiso elikhulu; Kuya kuba kuthi ukuba sithathe isigqibo sokunika into enexabiso elikhulu okanye hayi.
Ukuze ufumane into njengembuyekezo, kuyafuneka ukuba sinike into ukubuya kunye nexabiso elifanayo, kwinto esifuna ukuyifumana; Asinakho ukucela into ukuba asizimisele ukwenza konke okusemandleni ethu. Nangona kunjalo, ngaphandle koku, kufuneka senze kwaye sinike ngaphandle kokulindela ukufumana into njengembuyekezo, kuba yinto elungileyo ukuyenza, ukuyenza ngokusuka entliziyweni.
Okokugqibela, umzekeliso ukwasifundisa ukuba, ukuba sizama nzima ukufumana le nto siyifunayo; Kungekudala, yonke imizamo kunye nokuzincama kwethu kungavuzwa. Ukuba uhlala ebomini kuThixo, kuYesu, awusoze uhlale phantsi ulinde izinto zenzeke wedwa.
Iimfundiso ezivela kuYesu
Enye yezona ndlela zixhaphakileyo (kwaye zixabisekileyo) ezazisetyenziswa nguYesu ukufundisa abafundi bakhe nabalandeli bakhe izifundo ezithile; Kwakungenxa yemizekeliso kunye namabali, la mabali aqukethe ngaphakathi kwabo imvelaphi enkulu kakhulu yokuziphatha nokuziphatha ngokomoya. U-Yesu ubasebenzisile ukubonisa iimfundiso zakhe kwaye nangona ebenika inkcazo ngazo, uninzi lunokushiywa kukucinga ngokukhululekileyo komntu ngamnye.
Le mizekeliso inokusetyenziswa nangaliphi na ixesha kubomi bemihla ngemihla, nokuba kukunceda okanye ukufundisa umntu; Kuba, njengoko noYesu wenzayo nabalandeli bakhe, sikwanomsebenzi wokufundisa nokunceda abanye, ngakumbi abo bakudinga kakhulu. Obo bubomi bobuKatolika obulungileyo, ubomi bomKristu olungileyo.
Kanye kunye iperile yexabiso eliphakamileyoSinokufumana imizekeliso kwibhayibhile efana "nomSamariya olungileyo", "Igusha elahlekileyo", "umhlwayeli", "Unyana wolahlekonezinye ezininzi; Ukusuka apho, siya kuba nakho ukufumana ezinye iimfundiso eziya kusinceda ebomini bethu.
Kwiincwadi zeVangeli zebhayibhile, kuya kubakho imizekeliso emininzi ngakumbi, eminye yayo ingaziwa kakuhle kubantu abaninzi.
Kule vidiyo ilandelayo sikushiye ngezantsi, unokufumana umfanekiso kule ntsomi intle. Khumbula, ukuba ukutolika kwakho kusemthethweni kwaye kwamkelekile.